Hira : hiverina an-tsehatra i Tsiresy | NewsMada
Hira : hiverina an-tsehatra i Tsiresy
« Tsy nandao ny lapihazon’ny vazo sy ny hira izahay fa niketrika hira vaovao. Naka bahana bebe kokoa hahafahana manolotra ny kanto ho an’ny mpitia zavakanto », hoy i Tsiresy, omaly. Fotoana nanambarany ihany koa fa hiverina an-tsehatra izy 7 mirahalahy manomboka izao. Fiverenana miaraka amin’ny vazo vaovao toy ny “Fa be hambom-po“, “Rahafetsena“, “Ho aiza?“, “Fa tiako dia iriko” ary ny “Samy tia ny tia sy ny tiana”. Ito farany izay narafitr’i Tsiresy tamin’ny gadona salsa sy ny begina ary ny baoejy.
Na izany aza, tsy hadino akory ny teo aloha fa hohiraina eny an-tsehatra hatrany. Anisan’ireny ny « Iny lalana iny », « Ilay tantsambo », sns, izay hira nentiny namaky lay tamin’ny fikirakirana ny hira sy ny mozika tany amin’ny taona 2005. Misandrahaka amin-gadona maroloko tahaka ny sud af, zouk love, bagasy, begina, sns, rahateo ny tarika Tsiresy.
Ny fanatobahana ireo hira vaovao no hanamarika indray ny fiverenan’ny tarika Tsiresy anatin’ny hira sy ny mozika laroina soradihy kanto. « Tanjona ho ahy sy ho an’ny tarika Tsiresy hatrany ny hampita hafatra ho zary lasa vatsy sahaza ny isam-batan’olona, hamakivakiana ny fiainana », hoy izy. Raha ny fanazavany hatrany, anisan’ny manampy amin’ny fanatratrarana io tanjona io ny fanaovana fampisehoana sy fanentanana hetsika samy hafa, toy ny lanonana karakarain’ny fiangonana, mariazy, sns.